कोरोनाले खोलिदिएको पुँजीवादको सार चरित्र – विप्लव | रक्त न्युज
कोरोनाले खोलिदिएको पुँजीवादको सार चरित्र – विप्लव
पाँचौँ, पुँजीवादभित्र मानवीय समवेदना र उत्तरदायित्व निकै कमजोर छ भन्ने खुलासा भयो । कोरोना प्रकोप सुरु भएपछि स्पेनका वृद्धाश्रमहरूमा बिरामीहरूलाई त्यत्तिकै छोडेर हिँडेको समाचार आए । ब्रिटेनमा शववाहनभित्रै लासहरू सडाएर राखेको, अमेरिकामा एउटै खाल्डोमा कयौँ लासहरू दफनाएका विषयहरू छताछुल्ल भए । सरकारले जाँचबुझ समिति नै बनाउनुप¥यो । सारा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको प्रचार गर्ने पुँजीवादी मुलुकहरूभित्र यतिबिधि असंस्कार, अमानवीयता एवम् जनउपेक्षा प्रकट हुनु भनेको पुँजीवादी संस्कारको प्रतिबिम्ब हो । त्यहाँ पैसा र स्थिति सहज छ भने सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतको माहौल छ तर ती छैनन् भने केही छैनन् ।
सामाजिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका मुख्य हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने तर्क छाँट्ने मान्छेहरू यतिबेला लाचार देखिएका छन् । उनीहरूको निजीप्रधान सोचाइ मुनाफा कुम्ल्याउने धूत्र्याइँमा परिणत भएको छ । स्थिति कस्तो डरलाग्दो देखियो भने निजी क्षेत्रले करोडौँ नागरिकहरूलाई रातारात बेरोजगार बनाएर अभाव, गरिबी, भोकमरी र आत्महत्याको अनिश्चित कालो सुरुङतिर हुल्दैछ । नाफाका लागि भर्ती गरिएका श्रमिकहरूलाई आफ्नो नाफा कम हुने देखिँदासाथ एकरत्ति सुरक्षाभाव नराखेर सडकमा पु¥याइदियो । मालिकहरू उल्टै राज्यबाट अर्बौंअर्बको क्षतिपूर्ति र सहुलियतको माग गरिरहेका छन् । युरोप, अमेरिकालगायत देशमा राज्यले मालिकहरूको क्षतिपूर्ति गर्न खर्बौं डलरको बाढी बगाउनु परेको छ । सङ्कटमा राज्यको पुँजी लिएर बाँच्नुपर्ने हो भने नवउदारवादी अर्थप्रणालीको महिमागान किन गर्नुपर्ने हो र यसलाई विश्वको नमुना अर्थसम्बन्ध कसरी मान्न सकिन्छ ! अझ हाम्रोजस्तो पैसा बेचेर पैसा कमाउने पूरा परनिर्भर दलाल पुँजीवादी अर्थसम्बन्धलाई किन प्रश्रय दिने ! स्पष्ट छ– सामाजिक उन्नति एवम् नागरिक समृद्धिका लागि मात्र होइन, निजी सम्पन्नताका लगि पनि राज्य–पुँजी मुख्य हुन्छ ।
मानवसमाजको विकासले असफल सिद्ध गरेका तर बलजफ्ती अस्तित्व रक्षामा उत्रिने अर्थराजनीतिक व्यवस्थाका कारण मानव जातिले इतिहासदेखि अपूरणीय मूल्य चुकाउनुपरेको छ । पोप, मुल्लाह, पुजारीहरूको शासनलाई झूट साबित गर्न बु्रनोहरूले ज्यान गुमाउनु प¥यो । कोपर्निकस, ग्यालिलियोहरूले सास्ती बेहोर्नुप¥यो । आज प्रो. हरारेले भनेजस्तै विज्ञानमा विश्वास गर्ने क्रम बढेकाले कोरोनामा चर्च, मस्जिद, गुम्बा, मन्दिर बन्द हुन बाध्य भएका छन् । अर्को शब्दमा आज मानव जातिले विज्ञानको अभूतपूर्व रसास्वादन गर्न पाएको छ । परन्तु पुँजीवादबाट समाजले त्यही पीडादायी तर बहन गर्नैपर्ने व्यवहार भोग्नु परिरहेको छ । व्यवहारतः पुँजीवाद बेकम्मा र औचित्यहीन बनिसकेको छ तर उसको मूर्खतापूर्ण अडानले अनेकौँ झमेलाहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । हुनसक्छ कैयौँ विज्ञान र परिवर्तनका अभियन्ताहरूले यसको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । यद्यपि यो निश्चित छ– विश्व पुँजीवादले विश्वमा र दलाल पुँजीवादले नेपालमा त्यसरी नै वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादका लागि ठाउँ छोड्नु पर्नेछ जसरी पोप र सम्राट्को शासनले पुँजीपतिका लागि राज्य सञ्चालनको मञ्च त्याग्नुपरेको थियो ।
अघिल्लो लेखमाअस्पताल चहार्दाचहार्दै भरतपुर अस्पताल पुगेका तीन संक्रमितको मृत्यु
अर्को लेखमाराष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको अडानले फेरि अप्ठेरोमा ओली